Rastah mpaka sary | Fetifety volana oktôbra
Rastah mpaka sary
Fetifety volana oktôbra
Hiala kely aloha
Nampidirin'i lerastah ao anatin'ny Ankapobeny - 6 Okt, 2018
Tonga indray ity ny volana oktôbra, volana misy an'ilay fety amerikana izay niparitaka manerana ny tany ary antsoina hoe Halloween. Ho an'ny ankizy kely dia fanararaotana manao akanjo hafakely sy saron-tava isan-karazany entina mitety ny tranon'ny mpifanolo-bodirindrina ka mangataka vatomamy. Io ilay antsoin-dry zareo hoe trick or treat. Ho an'ny zatovo koa dia fanararaotana manao saron-tava mampatahotra izy io.
Kilalao moa izany no betsaka amin'izy io, ka tsy vitsy koa ny Malagasy manao fetifety kely amin'io. Tsy misy maharatsy an'izany mihitsy.
Etsy andaniny kosa anefa, tamin'ny herintaona lasa dia tsikaritra fa maro koa ny Malagasy nanohitra ny fanaovana fetin'ny Halloween. Misy antony vitsivitsy moa no tanisain-dry zareo, fa ny matetika hita dia ilay antony ara-pivavahana.
Raha amiko kosa anefa dia fety kilalao ihany izy io, ka tsy hitako izay antony andrarana ny olona tsy hifety. Tsy misy hoe manompo sampy na hoe manao fahabibiana akory, fa mba mifety kely tsotra mampifalifaly tena fotsiny.
Rohy maharitra / (0) Hevitra / (0) Verindrohy (trackback) / Mialoha